Iingcebiso kunye namaqhinga kukhuseleko lwekhompyuter- Ikkaro
yokuqalisa >> Ukhuseleko lwekhompyuter
Xa bethetha ngokhuseleko lwekhompyuter, abahlaseli bafika kwangoko ezingqondweni, bezivalele emakhayeni abo, ngokuchwetheza ikhowudi kunye nokufezekisa "ubumnandi" bezobuchwephesha.
Ngokuzenzekelayo wonke umntu uyayidibanisa nokuqhekeza, kodwa yinto ebaluleke ngakumbi kwaye yonke imihla.
Namhlanje sonke sisebenzisa inani elikhulu lezixhobo, iikhompyuter, iitafile, ii-smartphones, ii-fitbands, ii-smartwatchaes, izithethi ezi-smart, i-Smart TV, i-ereaders kwaye singaqhubeka nezinye izixhobo ezininzi ezinxibelelana nenethiwekhi. Sonke sisebenzisa inani elikhulu leenkonzo, ukubhenka, uthungelwano lwasentlalweni kunye neenkcukacha zethu. Kwaye uninzi lwabantwana bethu abasebenzisa ezi nkonzo abazukuzisebenzisa ezi nkonzo kwaye asazi ukuba sizisebenzisa njani ngokuchanekileyo, indlela yokuzijonga kunye nokuba ubuncinci bezokhuseleko ngelixa ubrawuza okanye usebenzisa igajethi.
Abantu abalwazi ulawulo lwabazali, amanyathelo amabini okuqinisekisa kunye nezinye izinto ezininzi ekufuneka zisisiseko kwaye kufuneka sazi ukuba ziyafumaneka ukusinceda.
Ukusuka kweli candelo ndiza kuzama kangangoko kunokwenzeka, ukucacisa kunye nokunika amaqhinga endiqinisekileyo ukuba ahamba kakuhle kuthi sonke.
Ukubrawuza nge-proxy yenye indlela yokubanakho ukukhangela ngokungaziwa, okanye kwimeko yam okwangoku ukuze ndikwazi ukuphuma ndiye kwilizwe elithile, oko kukuthi, hamba ngendlela i-webs ekholelwa ukuba sikwilizwe elithile ..
Ngenye imini ndachaza indlela yokunyanzela i-TOR, ukusikhupha kwindawo yelizwe elithile. Kodwa ndakuba ndiqalisile kuvavanyo, bendinokukhangela amazwe amaninzi, kodwa kwamanye afana nePortugal, andikwazi, kuba kubonakala ngathi akukho zindawo zokuphuma ePortugal nakwi-TOR iqhubeka nokucinga ngokungapheliyo.
Ndiye ndayisombulula ingxaki Ukunxibelelana nommeli wokulingisa ukubrawuza kwelo lizwe.
Ngamanye amaxesha sifuna ukuhamba ngathi sikwilizwe elithile, oko kukuthi, ukufihla i-IP yethu yokwenyani kwaye sisebenzise enye kwilizwe esilikhethayo.
Singafuna ukuyenza le nto ngezizathu ezininzi:
Iinkonzo ezinikezelwa kuphela xa uzulazula usuka kwilizwe elithile,
unikeza xa uqesha iinkonzo,
jonga ukuba iwebhusayithi iqulethe njani izinto ezikwindawo ethile.
Kwimeko yam yayilukhetho lokugqibela. Emva kokuphumeza iiplagi ezininzi kwiwebhusayithi yeWordPress, kuye kwafuneka ndikhangele ukuba ibonakalisa idatha ngokuchanekileyo kubasebenzisi belizwe ngalinye.